Maleeshiyaad taabacsan Mukhtaar Roobow oo lagu dhafaayo ciidamada DF iyo qorshe halis ah! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maleeshiyaad taabacsan Mukhtaar Roobow oo lagu dhafaayo ciidamada DF iyo qorshe halis...
Maleeshiyaad taabacsan Mukhtaar Roobow oo lagu dhafaayo ciidamada DF iyo qorshe halis ah!
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in Muqtaar Rooboow Cali Abuu Man-suur uu gaaray magaaladaasi, isagoona Baydhabo u tagay isku dhafka Maleeshayadiisa iyo Ciidanka Dowladda Soomaaliya.
Deegaanada maamulka Koonfur Galbeed uu ka arimiyo ayaa laga soo warinaya in Muqtaar Rooboow uu wado dadaal leys kugu daraayo maleeshiyaadka taabac san asaga iyo Ciidamada Dowladda ee ku sugan gobolada Baay iyo Bakool.
Muqtaar Rooboow ayaa sidoo kale diyaarsaday Ciidan safarada uu galaayo u raaca Meel walba uu gaarayo isaga oo wada qorshe halis ah maadama Maleeshiyaadka safarada u raacayo fikir ahan qaarkood weli taagersan yahiin Kooxda Al shabaab balse heyb ahaan u difaaceen xiligi uu isaga soo baxaayay kooxdaasi.